ဝက်သားလွှာအကိတ်ကြီးတွေကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိဘဲ အဝကင်စားနိုင်မယ့် …. – FoodiesNavi
ဝက်သားလွှာအကိတ်ကြီးတွေကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိဘဲ အဝကင်စားနိုင်မယ့် ….
By yin sandi On September 12, 2018 0
အဝစားဆိုမှ အဖတ်လုပ်တတ်တဲ့ ? အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် BBQ ရှယ်ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးအကြောင်း ဖောက်သည်ချပေးချင်ပါတယ်။ အသားတွေစုံနေအောင်ရတဲ့ဆိုင်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး ? ရနိုင်မယ့် ဝက်သားနဲ့အမဲသားကျတော့ ဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် ကျေနပ်နှစ်ခြိုက်သွားလောက်တဲ့အထိ အကိတ်ကြီးတွေရနိုင်မှာပါ။ ပြည်တွင်းကအသားတွေလောက်နဲ့တက်မလာဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံကမှာယူထားတဲ့ Import Quality အသားအရသာတွေကို ထိထိမိမိလျှာနဲ့ Level ညှိနိုင်မယ့်ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်နာမည်လေးက “Willys” ပါ။ ? ကိုရီးယားစားဖိုမှူးတွေကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးတာမို့ ကိုရီးယားစတိုင်အသားကင်အရသာကို အပြည့်အဝကြီးခံစားရှိနိုင်မှာပါ။
အသားလွှာတွေကြီးချက်ကတော့ ညှပ်နဲ့တောင်မနည်းဆွဲရတဲ့အဖြစ် ? အတုံးလိုက်ရှည်ရှည်လျားလျားအသားတုံးကြီးတွေကို အငွေ့တထောင်းထောင်းထနေအောင်ကင်ပြီး အကင်နံ့သင်းသင်းလေးကိုထိုင်ရှူရင်း ဘယ်လိုဘယ်ပုံကြိတ်ပစ်မယ်တွေးနေရုံနဲ့တင် ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းချက် ? အသားတုံးတွေကရှယ်ထူတော့ အပူရှိန်ပျောက်အောင်တော်တော်လေးမှုတ်လိုက်မယ်ရယ် ? စစစားခြင်းမှာ မင်မင့်ခံတွင်းထဲတော့ တော်တော်လေးပေါ့တယ် ။ အရသာနယ်ပြီးနှပ်ပြီးသားအသားတွေပဲ စားနေကျမို့ထင်တယ် အရသာရဲ့အတိမ်အနက်ကို ခံစားလို့မရဘူးရယ်။ ပဲပိစပ်အနှစ်အရသာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆော့စ်လေးနဲ့တို့စားကြည့်လိုက်မှ အားပါးပါး ? အသားကင်အရသာကို လျှာအတွင်းလွှာထဲအထိ ကွန့်မြူးသွားသလိုပဲ။ တော်တော်ကြီးကိုစားလို့ကောင်းတယ်။ လျှာဖျားလေးကစပြီး အာခံတွင်းထဲကဆင့် လည်ချောင်းထဲထိလျှောကျသွားတာတောင် အရသာဓာတ်တွေကလွင့်ထွက်မသွားဘူး။ စွဲစွဲမြဲမြဲကျန်နေခဲ့တာက တော်တော်ကြီးကိုထူးခြားတယ်။ အသားရဲ့အထိအတွေ့ကအစနူးညံ့လတ်ဆတ်နေရောပဲ။
အသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ ဆလပ်ရွက်ထဲမှာ ဆော့စ်နဲ့တို့ထားတဲ့အသားကင်လေးရယ် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ မုန်ညင်းချဉ်လေးထည့်မြုံပြီး အားပါးတရစားကြည့်လိုက်တော့ ကိုရီးယားစတိုင်အသားကင်အရသာကို ကိုရီးယားမှာသွားစားသလိုခံစားရစေမှာ ? အသေအချာပဲ။ ဆိုဂျူလေးပါမော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ရှယ်ကြီးဂေါ်သွားမှာကျိန်းသေပဲ။ အသားကင်တင်မကသေးပါဘူး။ အရံဟင်းတွေကလည်း ကိုရီးယားဟင်းလျာအကောင်းစားတွေကြီးပဲရယ်။ ရေဘဝဲချဉ်စပ်လေးဆို တော်တော့ကိုဖိုင်းတယ်။ ရေဘဝဲရဲ့အသားတွေကကို တင်းတင်းရင်းရင်းလေး ချိုချဉ်စပ်အရသာအနှစ်တွေဖြစ်အောင်ချက်ပေးထားတော့ စားရင်းစားရင်းစားလို့ကိုမဝနိုင်ဘူး ။ ဟင်းတွေကိုလုံလုံလောက်လောက်ချပေးထားတာမျိုးတော့မရှိဘူး။ ကိုယ်ဆိုရေဘဝဲလေးကြိုက်လို့ထပ်သွားယူတာ အနှစ်တွေအကပ်အသပ်တွေပဲကျန်တော့တယ်။ ထပ်ဖြည့်ပေးတာမျိုးမတွေ့ရဘူး။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ထက်(၂)နာရီလောက်ပဲနောက်ကျတာတောင် နည်းနည်းပဲမြည်းလိုက်ရတော့ သိပ်တော့မကျေနပ်ဘူးရယ် ?
အမဲသား ၊ ကြက်သား ၊ ဝက်သားတွေနဲ့ ကြက်ဥကိုပြောင်းဖူးကပ်ကြော်ထားတာလေးတွေရှိတယ်။ ရေမုန်ညင်းကိုဟင်းရည်ချက်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်။ ရေဘဝဲချဉ်စပ်အရသာကိုတော့ ဘယ်ဟင်းလျာမှမမီဘူး ? ဒုတိယတန်းစားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဝက်သားဟင်းလျာလည်းမဆိုးဘူးရယ်။ ဝက်သားဆလပ်အရသာအတိုင်းပဲ။ မင်မင်ကတော့ ဆလပ်ရွက်နဲ့ထုပ်ပြီး အားပါးတရဝိုက်ခဲ့တယ်။ အဝစားလည်းဖြစ်သလို အချိန်အကန့်အသတ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ အမုန်းဆွဲလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ Tax အပါတစ်ယောက်ကို (၉၈၀၀)ကျပ်တည်းဆိုတော့ အသားဖိုးနဲ့တင်ကိုတန်လွန်းပါတယ်။ အချိန်အကန့်မသတ်မရှိတော့ နာရီကြည့်နေစရာမလိုဘဲ အေးအေးဆေးဆေးလှိမ့်သွင်းရုံပဲ ?
မူလပထမဆိုင်ကတော့ ဦးရေခဲလမ်းထိပ် ၊ အောင်ရိပ်သာလမ်း ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်ဆိုင်ကတော့ လသာမြို့နယ် (၁၉)လမ်းအောက်ဘလောက်မှာပါ။ ဆိုင်(၁)ကတော့ပိုပြီးကျယ်သလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပိုရှိတယ်။ (၁၉)လမ်းဆိုင်က နည်းနည်းကျဉ်းတော့ ညှော်နံ့တော်တော်စွဲတယ်။ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၁)နာရီကနေ ည(၁၁)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ ?
In Reviews Tagged korean bbq Leaveacomment
ဘော်ဒါတွေစုပြီး တစ်ယောက်ကို(၄၉၅၀)ကျပ်ပဲကျသင့်မယ့် Package တွေနဲ့ တဝတပြဲစားနိုင်ဖို့…….
စက်တင်ဘာတစ်လလုံး (၂၂)ဒေါ်လာတည်းနဲ့ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ (၂)ယောက်စာ ဘူဖေးစားနိုင်ဖို့…